Speak up on Zimbabwe fear - Brown - Daily Star
Speak up on Zimbabwe fear - Brown
Prime Minister Gordon Brown has called on the international community to speak up against the "climate of fear" in Zimbabwe.
13:15, 26 APR 2008
He condemned violence committed in the southern African country against those who had voted for a change of regime.
"The whole international community must speak up against the climate of fear in Zimbabwe.
"The coming days will be critical. We will intensify international action around a UNSC discussion on Tuesday.
"We are supporting an arms moratorium until a democratic government is in place. And if there is a second round, the international community will insist that there are international monitors deployed and SADC and AU principles upheld.
"I welcome the positions taken by the UN Secretary General, by African leaders, by Europe, by the US and by all those who want to see a return to democracy in Zimbabwe.
"We, and others, stand ready to help rebuild Zimbabwe once democracy returns. I pledge that Britain will be in the vanguard of this effort."